गठबन्धन भत्कदैं ! माओवादी केन्द्रले भन्यो बरु सरकार छोड्छौं, एमसीसी पास हुन दिन्नौं – Classic Khabar
गठबन्धन भत्कदैं ! माओवादी केन्द्रले भन्यो बरु सरकार छोड्छौं, एमसीसी पास हुन दिन्नौं
September 10, 2021 41
एमसीसी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार नेपाल आएपछि यसवारे चर्चा फेरी चुलिएको छ । सुमारले सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरुलाई भेटेर एमसीसी बारे धारणा मागेकी छन् । एमसीसीकै विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरुबीच पनि फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
Prevमाधव नेपालले स्पष्ट भने, ‘सार्वभौमसत्ता पैसा र अनुदानमा बेच्दैनौं, एमसीसी चाहिँदैन’ त्यसपछि फातिमाले के दिइन् जवाफ?
Nextफार्मेसीमा बील तीर्न सक्दा पाँच दिनदेखि जुम्ल्याहा सन्तान जन्माएकी सुत्केरीको शव बन्धक
मामा र भान्जीले के गरेका यस्तो, उनीहरुका कारण परिवार समेत अप्ठ्यारोमा पर्यो